China Automatic iko ihuenyo ebi akwụkwọ igwe akara factory na-emepụta | Xinfeng
Ọ bụ akpaka iko silk ihuenyo ebi akwụkwọ igwe mmepụta akara nke kwesịrị ekwesị n'ihi na akpakanamde iko / ụkpụrụ ụlọ iko / ji achọ iko na ụdị nile nke nnukwu size iko silkscreen ebi akwụkwọ.
1) The iko silk ihuenyo ebi na-achịkwa site aka + PLC, Site na-akpaghị aka loading loading na-akpaghị aka silk ihuenyo ebi akwụkwọ → na-akpaghị aka ebutu, Ruo ihicha ọwara, All na-akpaghị aka ghọtara.
2) missionzọ nnyefe
A na-eji motọ brek nke ụdị mba ụwa. A na-ebunye ha na osisi na-anya ụgbọ nke mkpanaka osisi site na eriri gburugburu. The eyi na-eguzogide na ihe mgbaze na-eguzogide roba mgbanaka na aro nke mkpisi draịva njem nke iko mpempe akwụkwọ, The iko na usoro nke ibuga a ezigbo, mma, na dị ka mkpa ịgbanwe nnyefe ọsọ.
3) Isi mbuli
The isi inwego adopts mba ika breeki ipigide ipu reducer ga-ghọtara site yinye nnyefe .Up na ala kasị elu ọnọdụ na kasị ala ọnọdụ na sọrọ nchedo mgba ọkụ iji gbochie mbuli-ebuli igwe na onye ọrụ nchekwa.
4) Kpọmkwem n'ọnọdu
Kpọmkwem n'ọnọdu na asatọ n'ọnọdu ihe, ojiji nke abụọ na-cylinder mbanye (na mbanye, kwụ mbanye), n'ọnọdu pulley dị okporo ígwè, na nkenke bọl ịghasa ukpụhọde n'ọnọdu iji hụ na ezi n'ọnọdu bụ nnọọ ezi na onwem na ukpụhọde n'aka wheel, Ọnọdụ egosi na ukpụhọde kpochidoro ngwaọrụ. Gbanwee oghere dị n’etiti nnukwu iko na obere iko
5) Synchronous anya-okporo Ọdịdị imewe.
Site na ihe nchacha arụmọrụ mebere etiti ga-akawanye mma, yana iji ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, anaghị emepụta ebili mmiri na ike ọgwụgwụ. N'ihi na a dịgasị iche iche nke dị iche iche viscosity ink, dị iche iche erughị ala ihuenyo ihicha iji belata onyinyo, deformation, nke nnyapade version izute a dịgasị iche iche nke na-nkenke-ebi akwụkwọ.
6) Usoro nchịkwa nke sayensị
Site na ngwaọrụ nchebe, ọ nwere ike igbochi mmebi nke ngwaahịa / igwe na onye ọrụ.
Printing Isiokwu Size (mm)
Igwe Igwe Mbipụta Igwe
Igwe Mbipụta Igwe
N'obi Glass Screen Printing Machine
Glass Screen Printing Machine, Akpaaka Screen Printing Machine, Igwe Mbipụta Igwe, Ihuenyo Silk Printing Machine, Silk Screen Printing Machine, Silkscreen Printing Machine,